पहिले अख्तियार, अव पत्रकार
पहिले पनि सूर्ती व्यापारमा लगानी गर्दा कम्पनीलाई दण्डित गरियो तर लगानीकर्ता दीप बस्नेत चोखै बचे । त्यसपछि अख्तियार प्रमुखसमेत बन्न सफल भए । अख्तियार प्रमुख हुँदा सरकारको हनुमानगिरी गरेवापत मजाले कमाउने अवसरपाए । अवकाश भएपछि अव सञ्चारमा लगानी गरेर पत्रकारिताको कमाण्ड सम्हाल्नेतिर पो अग्रसर भएछन् दीप बस्नेत ।
हुन त पैसा भएपछि जता लगानी गरे पनि भयो । कसले छुने अख्तियारवालाहरुलाई ? त्यसै पनि अर्का एक सदस्य ७० करोडको घरमा बस्दा रहेछन्, सुशासन ल्याउँछु भनेर अख्तियारमा नियुक्ती लिने अनि आफै अख्तियारीको दुरुपयोग गर्ने काम नेपालमा भइरहेकै छ । कसले हेर्ने ? कसले जाँच्ने ?
अख्तियारको प्रमुख आयुक्तबाट गतमाघ २९ मा बिदा भएका दीप बस्नेतले सरकारी सेवामै रहँदा कुम्ल्याएको अकुत सम्पत्ति विभिन्न क्षेत्रमा विभिन्न व्यक्तिका नामबाट लगानी गरेको खबर सार्वजनिक भइरहेकै छन् । स्रोतका अनुसार बस्न्यातले सञ्चारमा लगानी गर्न लागेका छन् भने पछिल्लो समयमा एक जना क्यासिनो व्यवसायीका नाममा काठमाडौं लाजिम्पाट स्थित ग्वाङजोङ होटलको ठूलो मात्राको सेयर खरिद गरिसकेका छन् । यिनले याख्खा म्यानपावरमा लगानी विस्तार गरेपछि चन्द्रागिरी केबलकारको ८ प्रतिशत शेयर हत्याएको समेत खबर बजारमा झ्याइँ झ्याइँ भएको देखिन्छ । यिनको ठूलो धनराशी विशाल ग्रुपले चलाइरहेको छ । विशाल ग्रुपको देखाउने काम भनेको सूर्ती व्यवसाय हो । यसमा धर्मराज उपाध्याय र डा. उपेन्द्र महतोसमेत सामेल रहेको विशाल ग्रुपको असली धन्दा सुनमा समेत समेटिएको बताइन्छ । तर नेपाल यस्तो देश हो, जहाँ प्रभाव र दबाब सिर्जना गर्न सक्नेले जे गरे पनि हुन्छ, गर्न सकिन्छ ।
यिनी कान्तिपुरजस्तो दह्रो सञ्चारको सोचमा छन् । जसले प्रधान न्यायाधीश फाल्न सक्छ, राजनीतिक नेताहरुको सातो लिनसक्छ, सत्ता हल्लाइदिन सक्छ, त्यस्तो मिडिया यिनको सोच छ रे । दीप बस्न्यातको दीप प्रज्ज्वलन होला त ?
नेपालमा उच्च पदमा पुगेकाहरुलाई लज्जाबोध नै हुँदैन । जसरी पनि अरु पैसा कमाउने र आफू प्रभावशाली रुपमा रहिरहने कसरत केही व्यक्तिको मानसिक रोग नै बनेको छ । यही रोगको पछिल्लो सिकार बनेका छन्, अख्तियारका पूर्वप्रमुख दीप बस्न्यात । यी तिनै दीप हुन् जसले नेपाल आयल निगमका गोपाल खड्काको बीच बचाउ गरेर कमाउनु कमाए । सर्वा अर्व घोटाला भएको जग्गा काण्डमा यिनको पनि साझेदारी रह्यो । त्यसैले त जग्गा विक्रेता र समाजले भ्रष्टाचार भयो भन्दासमेत यिनले जाँच नै गरेनन् । नेपालमा यस्ता सयजनाजति व्यक्ति छन्, जसले अकूत सम्पत्ति त कमाए तर यिनको सम्पत्तिको स्रोत राज्यले, राज्यका अंगले कहिल्यै खोजेन । सामान्य घर बहालमा लगाएर घरखर्च चलाउने, हातमुख जोर्नेमाथि कर लाद्ने सरकारले यस्ता भ्रष्टाचारमा गनाएका र सम्पत्ति जोडेकाहरुको छानबिन नगरेसम्म प्रधानमन्त्री ओलीले चाहेको सुशासन कसरी कायम हालो ?